उदयपुरका संक्रमित १२ जनामा कोरोनाको कुनै लक्षण छैन - शोलुसन
शोलुसन शनिबार, बैशाख ०६, २०७७
विराटनगर । उदयपुरमा भेटिएका १२ जना कोरोना संक्रमितमा पोजेटिभ देखिए पनि कुनै कोरोनको लक्षण देखिएको छैन। उदयपुरबाट शनिबार विहान १ बजे विराटनगर ल्याएर भर्ना गरिएका ११ जना भारतीयसहित एकजना नेपालीको अवस्था सामान्य रहेको छ ।
कोरोना पोजेटिभ देखिएपनि उनीहरुको अवस्था अति सामान्य रहेको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. संगिता मिश्राले बताइन। डा. संगिता मिश्राका अनुसार संक्रमित १२ जनाले आफूहरुलाई कुनै समस्या नरहेको बताएकाले न्यूनतम औषधी चलाउन बाहेकको काम गरिएको छैन ।
उनीहरुको स्वास्थ्य अवस्थाको निगरानी राख्दै आएका एक डाक्टरले कोरोना पोजेटिभ देखिएका सबैको अवस्था सामान्य मात्र नभएर स्वास फेर्नदेखि रुघाखोकी सम्मको समस्या नभएको बताए।
संक्रमितलाई कुनै लक्षण नदेखिए पनि उनीहरुलाई कुनैपनि बेला समस्या पर्नसक्ने कुरालाई ध्यानमा राखी सोही अनुसारको तयारी गरिएको छ । ८० प्रतिशत संक्रमितको अवस्था सामान्य हुने भएका कारण जोखिम फैलन सक्ने संभावना धेरै हुने मानिएको छ ।
उनीहरुसहित थप चारजनालाई पनि सँगै ल्याइएको छ । संक्रमित को–को हुन् भन्ने कुरा पहिचान गर्न नसकेपछि १६ जनालाई नै ल्याउनु परेको थियो । हाल संक्रमण पुष्टि नभएका चार जनाको पहिचान गरी उनीहरुलाई अर्कै स्थानमा क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ ।